यौन शिक्षा बच्चाका लागि आवश्यक छ, तर कुन उमेरमा ? – Everest Dainik – News from Nepal
एजेन्सीः बच्चाको दिमाग गिलो माटो सरह हुन्छ, यसलाई जस्तो आकार दिन खोज्यो त्यस्तै बन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई जीवनसँग जोडिएका विभिन्न कुरालाई निकै गम्भीरताका साथ सम्झाउन निकै आवश्यक छ । तर जब बच्चालाई यौन शिक्षा दिनेबारे कुरा आउँछ तब हाम्रो मनमा एक किसिमको अप्ठेरो स्थिती सृजना हुने गर्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यौन एक निकै संवेदनशील विषय हो जसलाई यदि सही तरिकाले नबुझाइएको खण्डमा बच्चाको मनमा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ ।
बच्चाले टिभीमा ‘कण्डम’ को विज्ञापनमा अंकल–आन्टीलाई अचम्मको स्थितीमा देख्दा उनीहरुको मनमा आखिर यी दुईले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उत्सुकता जाग्न सक्छ । यस्तोमा यदि बच्चाले हामीलाई यसबारे प्रश्न गरे, हामी बच्चालाई हप्काउने वा रिसाउने गर्छौं । यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि आखिर अभिभावकले बच्चासँग सेक्सबारे कुराकानी कहिले र कसरी सुरु गर्ने रु
उनीहरुसँग कसरी कुरा गर्ने?
ट्याग्स: बच्चा, यौन शिक्षा